Depiote aterina hamonjy fivoriana : Ny mpiasam-panjakana rahonana tsy avela hiasa -
AccueilRaharaham-pirenenaDepiote aterina hamonjy fivoriana : Ny mpiasam-panjakana rahonana tsy avela hiasa
Depiote aterina hamonjy fivoriana : Ny mpiasam-panjakana rahonana tsy avela hiasa
30/04/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ny alarobia ho avy izao no hisokatra amin’ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana voalohany amin’ity taona ity, izay tontosain’ ireo solombavambahoaka araka ny voafaritry ny lalàm-panorenana. Mandritra izany anefa dia mitohy ihany ny hetsika izay tanterahin’izy ireo eny amin’ny kianjan’ny fifankatiavana etsy Analakely, ary fantatra fa anio izy ireo no hoe hamoaka ny mpiasam-panjakana izay mbola manao ny asany amin’ ny fampandehanan’ny raharaham-pirenena hanaraka ny hetsika izay ataon’izy ireo. Ireo solombavambahoaka ireo moa marihina fa tsy maintsy mamonjy ny fivoriana ara-potoana, satria misy fiantraikany amin’ny tambin-karama izay raisin’ izy ireo ny tsy fahatongavana. Tahaka izany ihany koa ny an’ ny mpiasam-panjakana izay mila porofo sy fanamarinana ny tsy fahatongavana miasa, mba tsy hisy fiantraikany amin’ ny karama sy ny tsy fanarahana ny fitsipika. Ireo solombavambahoaka ireo rahateo izay mahazo ihany koa tambin-karama amin’ ny fiatrehana ny fivoriana eny amin’ny antenimieram-pirenena, ankoatra ny tambin-karama izay efa raisin’ izy ireo isam-bolana. Izany hoe tsy mitovy amin’ny mpiasam-panjakana, izay ny karama ihany no raisin’ izy ireo isaka ny faran’ ny volana.
Midika izany fa zavatra mifanohitra tanteraka no kasain’ireo solombavambahoaka tanterahina amin’ ny hetsika izay kasain’izy ireo hotanterahina anio, satria ireo mpiasam-panjakana alaina tsy hiasa izay hoe mety hisy fiantraikany amin’ ny karaman’izy ireo izany. Saingy kosa ankilany, ireo solombavambahoaka andeha haterin’ izy ireo eny amin’ ny antenimieram-pirenena hanaporofo ny fahatongavana amin’ny fandraisan’ izy ireo tambin-karama maro samihafa. Noho izany ireo mpiasam-panjakana manatitra mety ho tapaka karama, fa kosa ireo solombavambahoaka ankilany dia handray ny volaben’ izy ireo sady haterina. Tahaka izany ve izany no tian’ny solombavambahoaka hotanterahina eto amin’ ny firenena, hoe ny tombontsoan’izy ireo aloha vao ny an’ny hafa. Ny an’ny hafa aza tsy horaharahiana, satria raha maka sary an-tsaina fotsiny isika dia hiankinan’ny fianam-bahoaka ny asam-panjakana toa ny fandoavam-bolan’ny be antitra sy ny an’ny mpiasam-panjakana. Dia hatao sorona ve izany ny Malagasy iray manontolo, izay tafiditra amin’izany ny vahoaka malagasy manerana ny nosy.
Nampahafantarina omaly tetsy amin’ny hotely tetsy Anosy ny rijan-teny izay mamaritra ny fomba fiasan’ireo mpanara-mason’ny asa eny anivon’ ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, izany hoe ireo préfet rehetra manerana ny nosy no nanatrika ny lanonana amin’ny maha ...Tohiny